6 Inoshanda Bhizinesi Zvishandiso zveCognitive Intelligence - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Cognitive Computing, Digital Nokuchinja
6 Anoshanda Bhizinesi Zvikumbiro zveCognitive Intelligence
Rudzi rutsva rwekutengesa AI rwebhizinesi riri kubuda kuti riwane zvirevo zvakaomarara zvekudyidzana kwemazuva ano kwevanhu-muchina. Isu tinoidaidza kuti njere dzekuziva, izvo zvisiri pano kuzotora big data or machine learning, asi pachinzvimbo chekutarisa maitiro echinyakare AI kugadzirisa data, achizadza mipata uye achiona zvisirizvo kududzirwa. Pakupedzisira, chinangwa chekuziva njere chikuva kugona kupedzisa mabasa pasina kukosha kwekutarisirwa kwevanhu, nekukurumidza kugadzirisa kusatarisika kana kusazivikanwa kwekunze kwekuisa uye kugadzirisa mhinduro yayo nenzira kwayo. Kwese kwaanoshandiswa, ungwaru hwekuziva huchave hwechokwadi hwemvura AI.
6 Inoshanda uye Isingatarisirwe Bhizinesi Kunyorera kweCognitive Intelligence:
Kubatanidza uye kugadzirisa zvishandiso, data uye iyo IoT. Izvo zvinhu zvinotevera zvekubatanidzwa muIOT zvichave chero zvisati zvave. Asi tichifungidzira kuti tinowana mamwe ma sensors nemidziyo, iyo chaiyo kiyi ndiyo ichavabatanidza. Uye kwandiri, iko kungwara kwepamberi, kumucheto.
Semuenzaniso, isu tinoona iyo yakadamburwa mesh network, kunge mafashama emadroni kana zvivakwa zviri kure zvakazadzwa nema smart sensors nemaactuator, zvinoda kuronga kuti zviite mabasa, pasina kubatana nehukama. Kuziva kweAI vamiririri vanogona kupa zviwande zvemidziyo mamiriro ekuziva uye voita kuti vashande pamwe kugadzirisa matambudziko. Mumwe muenzaniso igoriri remafuta mugungwa nezviuru zvema sensors anoda kubatana kuti ape data. Rig haina kubatana nekukurumidza kune internet, saka gore rebasa AI iri kunze. Iwo ungwaru hunofanirwa kuve hunogara pamipendero michina kuti vagone kuongorora matambudziko ane ngozi uye kuita kudzivirira njodzi munguva chaiyo-yenguva.
Hazvina kusiyana zvakanyanya nekupa simba kuzvimiririra pamhepo paMars kuti atore zvisarudzo, kumatama akareba uye mune zvakanyanyisa mamiriro, inova chikamu cheedu nzvimbo chirongwa chenhaka. Kana tora nyaya yezvikepe zvakakura zvezvikepe. Parizvino, ivo havana kunyanya kutariswa uye kusagadziriswa, kunyanya vachienzaniswa nedzimwe nzira dzekutakura. Funga nezve ma supankanker akakurisa-kupfuura-avhareji emidziyo michina iyo inogona kubatanidzwa, kuteedzerwa uye kurongedzwa kuburikidza nemasaiti eCubeSats anofambiswa neAI.
- AJ Abdallat, CEO we Kupfuura miganhu
2. AI-Inogoneswa Kuchengeteka:
Nenguva isipi chakagadzirwa njere inova yakaomesesa isu tichaona kuwanda kwenhamba yehungwaru cyber-kurwisa. Uku kukwira kwekurwiswa kwecyber kunoguma nekuputika kwenzvimbo dzemambure, kuwedzera kurwisa kweinjiniya yemagariro, uye kusagadziriswa kwehutachiona hwemakomputa akangwara semoto wemusango. Tariro yedu chete yekurwisa izvi ingangove iko kushandiswa kwekuchengetedzwa kwedata uye kunatsiridza mamiriro ekuziva kunoitwa neAI. Izvi zvinopa gwaro, dhata, uye network kukiya uchishandisa smart yakaparadzirwa dhata yakachengetedzwa nekiyi yeAI.
3. Inotevera Generation Kutsvaga:
Isu tese tinoda Google nezve zvazvinoita. Kungobaya chete, tinowana mukana kune ruzivo rwunosvinwa kubva kumabhirioni emapeji ewebhu. Asi ichokwadi zvakare kuti mhedzisiro yatinowana haigadzirise nguva dzose mubvunzo. Google yakanyatsoshandisa algorithm yekunyepedzera inokamuranisa mapeji anoenderana nekuzivikanwa uye mazwi akakosha. Iyo ramangwana ikozvino rave mukufunga uye kufunga kwakavakirwa pakutsvaga iyo inoburitsa yakanyanya kurongeka uye inoenderana mhedzisiro. Tichave tichishandisa AI-based search engine inoita kuti zvese izvi zvikwanisike. Kunyangwe icho chinopihwa chichava kubva kuGoogle kana kuti hausati uchiri mubvunzo usina mhinduro.
4. Zvemukati AI:
Mhinduro inofambiswa nehungwaru hwekuziva inoramba ichidzidza uye zvikonzero zvinova zvine hungwaru uye zvinogona panguva imwe chete kusanganisa nzvimbo, nguva yezuva, maitiro evashandisi, kusimbisa semantic, chinangwa, manzwiro, evanhu vezvenhau, kuziva mamiriro uye humwe hunhu hwemunhu. Izvi zvinobvumira yakasarudzika midhiya kuendesa & zvemukati zvemari. Iyo chaiyo-nguva data ongororo kuperekedzwa nehungwaru hwekuziva kunogona kupedzisira kwaunza vabatsiri vanehungwaru vanotaurika navo mupfungwa chaidzo.
5. Cognitive Analytics muhutano:
Iye zvino, yepamusoro uye yakadzika analytics uye nzwisiso ichave inotaurika zvakanyanya. Tinogona kutarisira vamiriri vekuziva kuti vafambise kufambira mberi mukutsvagisa kwegenomics, kuwanikwa kwezvinodhaka, kuongororwa, uye hutano hwevanhu. Iyo tekinoroji inoshandisa vanhu-sekufunga software mabasa anoita deductive, inductive uye abductive ongororo yehupenyu sainzi maapplication. Iye zvino isu tinokwanisa kuongorora mamiriro ekufungidzira ekuwanikwa, kuona hutano husina kunaka, kuronga mhedzisiro yekuongorora uye kuwana hukama pakati pezvinoita sezvisina hukama ruzivo ruzivo rwehutano.
6.Nzira-Yakavakirwa Natural Mutauro Kugadziriswa:
Data masayendisiti ichafamba kubva basic Machine kudzidza matekiniki senge akawanda-chitaridzi kupatsanura kune mamwe akazara akadzika neural network ayo anoda chaizvo makuru data seti. Nekudaro, isu tichave tichifamba kupfuura izwi template inoenderana kune yekudyira kune mushandisi chinangwa. Iyo nhanho yechinangwa kuenderana inogona kusiyanisa pakati pekunyanyisa masosi.
Semuenzaniso, kana ndikati, "Ndiri kuda kunyorera musangano waDr." Iyo bot inogona kureva vanachiremba vepedyo zvichienderana nenzvimbo yangu. Izvi zvinoita kunge zviri nyore mamiriro ezvinhu asi zvimwe zvazvinogona kuita kutarisa kuburikidza neyangu yekutsvaga nhoroondo uye kuendesa chiremba chaiye kana maitiro angu epamhepo achiratidza kutsvagisa nezvechimwe chirwere kana hutano mamiriro.
Uchenjeri hwakazara hwekuziva hunogona kubatsira bhizinesi kuti riwedzere kuongorora maitiro avo kune manejimendi uye kuita sarudzo. Iyi ndima ye chakagadzirwa njere kushanda ndiro danho rinotevera kubva Machine kudzidza uye zvinoshandiswa zvemberi zveAI zvicharerekera mukushandisa izvi kuita zvine musoro kufunga uye kuongorora.
At NewGenApps takavaka kugona kwakasimba mukushanda patekinoroji dzazvino uno dzinopa zvido zvinoshanduka zvemabhizimusi. Bata nhasi kana iwe uri kutsvaga kugadzira mhinduro yakangwara yezvaunoda.